Naya course » किन हपारे देउवाले निधिलाई ? किन हपारे देउवाले निधिलाई ? – Naya course
काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र नेपालस्थित भारतीय दूतावासले चलखेल सुरु गरेको छ । देशको उत्तर पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कायम गर्दै सरकारले नेपालको नक्सा जारी गरेपछि भारतीय दूतावासले चलखेल सुरु गरेको हो । समाचार स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासले नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुलाई विभिन्न च्यानलमार्फत भेटघाट गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमको विरोध गर्न आग्रह गरेको छ ।
नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमका विषयमा उपसभापति निधिले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वागत गरेका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसले आठ महिनाअघि राखेको माग पूरा गरेको भन्दै ओली सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । यस्ता वक्तव्य कि त पार्टी सभापतिद्वारा जारी गरिन्छन्, कि त प्रवक्ताद्वारा, नभए केन्द्रीय कार्यालयद्वारा । त्यसैले उपसभापति निधिले कुन हैसियतले वक्तव्य जारी गरे रु भन्ने प्रश्न नेपाली कांग्रेसभित्रकै सिटौला समूहले उठाएको छ । तर, सिटौला समूहकै नेता गगन थापा भने मौन छन् ।